Teatra : hisokatra amin’ny any ivelany ny « Tamaboho 2 » | NewsMada
Teatra : hisokatra amin’ny any ivelany ny « Tamaboho 2 »
Araka ny efa fanambin’ny Akademy theatre Antananarivo, hisy isan-taona ny « Festival Tamaboho ». « Tsy maintsy hisy ny amin’ity taona ity ary hotanterahina eo anelanelan’ny volana mey sy oktobra. Hetsika iraisam-pirenena io. Noho izany, ho hentitra sy hanaraka ny fenitra ny zavatra rehetra. Ho fanatrarana izany indrindra, eo am-pikarohana mpiara-miasa izahay », hoy Randrianierenana Henri, mpitarika amin’ny fikarakarana sady mpampianatra ao amin’ity sekoly ity.
Ezahina ny hitondra fanatsarana isaky ny andiany mandritra ny « Tamaboho ». Vinavina, amin’ity taona ity, ny hanasa mpanakanto (mpanao teatra) avy any ivelany. Faniriana io, saingy tsy vita mora izany ka eo am-pitadiavana ny lalana ho amin’izany ny mpikarakara, araka ny nambarany hatrany.
Raha tsiahivina, mandray anjara betsaka amin’ny fisehoana an-tsehatra, mandritra ity « festival » ity ireo mpianatra nivoaka avy ao amin’ny Akademy teatra Antananarivo. Sehatra iray hisedrana ny fahalalana azon’izy ireo io. Fantatra fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo liana.
Maharitra sivy volana ny fianarana ao amin’ny sekoly. Mizara telovolana telo izany. Hianarana, mandritra ny telovolana voalohany, ny fahaizana miserasera amin’ny olona, ny fifehezan-tena ary ny fanehoana fihetseham-po am-bava sy amin’ny fihetsika. Ao anatin’ny telovolana faharoa no hanovozam-pahalalana mikasika ny fiakarana an-tsehatra.
Aorian’izay, mandritra ny telovolana farany, ampianarina mamokatra piesy na tantara sy ireo karazana asa hafa manodidina ny teatra, toy ny fifehezana ny jiro, ny fiakanjo, sns, ireo mpianatra. Nomarihin’ny tompon’andraikitry ny Akademy theatre Antananarivo fa azo atao tsara ny mijanona tsy manohy ny fiofanana rehefa vita ny telovolana voalohany na faharoa.